NepalManch :: के राज कुन्द्रा र शिल्पा सेट्टी गर्दैछन् सम्बन्ध विच्छेद ?
के राज कुन्द्रा र शिल्पा सेट्टी गर्दैछन् सम्बन्ध विच्छेद ?
मंसिर ६ २०७८, सोमबार
काठमाडाैं : बलिउड अभिनेत्री शिल्पा सेट्टी र राज कुन्द्रा बीचकाे सम्बन्धलाई लिएर विभिन्न सञ्चार माध्यमले प्राथमिकताका साथ समाचार छापी रहेका छन् । अहिले भने उनीहरूको सम्बन्धविच्छेद हुने खबरले विभिन्न सञ्चार माध्यममा चर्चा पाएको हो ।
समाचारअनुसार राजलाई हिरासतमा लिएपछि शिल्पा र उनको सम्बन्ध कमजोर बनेको छ । यही कारण शिल्पा अब राजसँग बस्न चाहँदिनन् र शिल्पाले राजसँग सम्बन्धविच्छेद गर्न लागेको खबर आएका छन् ।
यद्यपि यी समाचारमाथि राज र शिल्पा दुवैको तर्फबाट कुनै पनि प्रतिक्रिया आएको छैन । तर, हालै शिल्पाले आफ्नो इन्स्टाग्राममा एउटा पोस्ट गरेकी छन्, जसले सम्बन्धविच्छेदको खबर खण्डन गर्छ ।
शिल्पाले विवाहको तस्वीरहरू सार्वजनिक गरेकी छन् । यसबाट के थाहा हुन्छ भने उनीहरू अलग हुन चाहँदैनन् । वास्तवमा शिल्पा र राजको विवाहको १२ वर्ष पूरा भएको छ । उनीहरूले २२ नोभेम्बर २००९ मा विवाह गरेका थिए ।
तस्वीर शेयर गर्दै शिल्पाले लेखेकी छन्, ‘१२ वर्ष पहिलेको यो पल..हामीले यसलाई बनायौं र वाचा गर्‍यौं…त्यसलाई पूरा गरिरहनेछौं, राम्रो समयका साथमा बिताइरहनेछौं । मुस्किल समयमा प्रेम र भरोसाको साथमा सहनेछौं ।’